Zawgyi for iOS7(Thank Thant Thet) - .::just for share::.
Home » iOS7 Front » Zawgyi for iOS7(Thank Thant Thet)
Zawgyi for iOS7(Thank Thant Thet)
iOS7ပေါ်မှာ မြန်မာလို မမြင်ရလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား ..
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad, iPod ကြိုက်တဲ့ iDevice ပေါ်မှာ အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ မြန်မာလို မြင်ရပါပြီ.
Jailbreak လုပ်စရာလို ၊ Third Party Application သုံးစရာ မလို ပဲနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Install Zawgyi-Font on iOS7without jailbreaking......
1. Go to this link from iOS7 device..
reference : http://kusumotolab.com/decoding-mobile-configuration-of-font-install-ios7/
Labels: iOS7 Front